Chest. Isizathu ukuqhosha noma amahloni abesifazane. Akubona bonke abaneziphiwo omkhulu, bakwazi ukubhekana nokuhlupheka, kukhanga amadoda ngokudayisa, kodwa abantu abaningi abafuna njengalolo. Konke ezandleni owesifazane, isifiso sakhe, ukukhuthala nangentshiseko. Isikhathi esining impela wezwa umbuzo mayelana nokuthi ungakwenza kanjani a upruzhe webele. I emikhulu kunjalo, kuya kuba nzima nakakhulu ukulondoloza izinga layo. Kukhona izimpendulo eziningi, njengoba izindlela futhi luyindlala namuhla. Lo msebenzi, futhi ukubhucungwa, kanye nokusebenza, futhi amakhambi abantu. Nguwena owesifazane.
Coming yombuzo zendlela yokwenza amabele upruzhe kwasekuqaleni ukuba ugxile umsebenzi. Morning kumelwe siqale ukukhokhisa. Umkhakha obhekelele isimo Isiyingi nezingalo kudingeka zishise imisipha yakho, bese ungakwazi udlulele umzimba eziyisisekelo - ukusunduza-ups. Othile kungenzeka bakwazi nje nizenze phansi. Kulokhu, ungaqala ukuba ekhama kusuka kunoma iyiphi into, isibonelo, kusofa noma iwindi sill.
Ungase futhi bahlanganyele ithanga. Kulokhu, konke okudingayo ukwenza okufanayo njengoba ngenqubo evamile ye-push-ups, kuphela imilenze ungekho ngqo - kubalulekile yokwelula ngamadolo phansi. Kulesi umsebenzi, ungasebenzisa bacabangisise ahlukahlukene. Izandla zingafakwa esinda ububanzi futhi uqondise entendeni bacondze etindzaweni letehlukene, ngakho webele uzobe akhishwa ngokulinganayo.
Ngoba indlela yokuzivivinya umzimba esilandelayo lapho ukudinga dumbbells. Sidinga ukuba baphakamise izandla nge amagobolondo futhi ke ukuqamba amanga nokukhohlisa isigamu-bayiphendule. Kulezi izikhundla ezifanayo ongenza ephakamisa induku. Nokho, imfihlo kungenye sivivinyo statics. Kufanele kube esifubeni ezingeni ngawakhamela entendeni yesandla sakho ukuze bacele ukuba oFakazi eside ngangokunokwenzeka. Plus, lokhu ukuzivocavoca alula futhi iqiniso ukuthi kungenziwa noma kuphi.
Okuningi ekunqumeni ukuthi ukwenza upruzhe webele awukwazi ukuthola round umsoco. Lokhu kubaluleke kakhulu. Nazi ephelele izithelo nemifino obomvu kanye nemibala orange, ezifana amawolintshi, tangerines, ama-aphula, izaqathi. Futhi, ezifana uphizi, iminqumo, udali, yebo, imikhiqizo yobisi.
Amantombazane amaningi ayakhathazeka enze iphutha elibi kakhulu. Bazama ukugqoka izingubo okuncane ehlobo, futhi konakalisa amabele abo ngokwabo. Ngaphansi kwethonya zokukhanya oku-ultraviolet esikhumbeni kubangela Ukuwohloka okusheshayo futhi ukuguga ke. Okungukuthi, umswakama waso futhi nokuvikelwa ezibalulekile ezivela imisebe yelanga.
Phakamisa amabele ngaphandle kokuhlinzwa futhi kungase kube olunye uhlobo ezifana massage. Omunye ifomu ngempumelelo okwenza amanzi amaningi kuwo kubhekwa, kusukela kuba soft ngaphezulu, emnandi futhi ephumelelayo. Ngaphansi kwethonya yamanzi kuqinisa esifubeni. Awukwazi ukwenza ingcindezi kakhulu njengoba lokhu kungase ona le ngokudayisa, futhi incane kakhulu ngoba ngaleso sikhathi umphumela ngeke. Futhi, nezinga lokushisa kufanele kube hhayi kakhulu, kodwa hhayi ezincane. Futhi ukubhucungwa ngenxa webele ukukhulisa kuyinto ukulungiswa okujwayelekile, lokho kuyinkomba liphelelwa amanzi, futhi ngosizo izandla kanye okhilimu. Inqubo uhlobo kuyakhethwa kuye nesimo libanjwe futhi umphumela ufuna ukuphumelela.
Ngakho, ngemva zonke lezi amathiphu umbuzo kanjani ukwenza upruzhe webele, kufanele ivalwe. Konke kuncike isifiso wesifazane abe ikhange nakakhulu futhi kube efiselekayo. By endleleni, ungakhohlwa mayelana zangaphansi. usayizi Bra kufanele bakhethwe ngobukhulu, ngakho-ke akuveli hang out. Into esemqoka ukuthi akunjalo phusha webele, ngoba akukho okuhle futhi ngeke kusaphela.
Man, izinhlanzi ongaqondakali, ayisizi futhi abanothando